हरेक दिन, आफ्नो तालिकामा आउँदो खाना खाने खतरा बुझ्ने व्यक्तिहरूको संख्या आज बढ्छ। यो खेल जीवनशैलीको लोकप्रियताले बढाएको छ जसले संसारभरि फैलियो र उचित पोषणको सक्रिय प्रचार।
म यहाँ भन्न सक्छु, जब सम्पूर्ण सञ्जाल शाब्दिक विभिन्न लेख र आहार बारे भिडियोहरू भरिएको हुन्छ। तर सम्पूर्ण समस्या यो हो कि कुनै विशेषज्ञले यो कुरामा कुनै सिफारिस दिनुपर्दछ: वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, पोषण विशेषज्ञहरू। स्वास्थ्य सुधार गर्न सट्टा ती व्यक्तिहरूलाई ती सुझावहरू जोगाउन मद्दत गर्न आवश्यक छ।
एक स्वस्थ आहार को एक अभिन्न अंग मानिन्छ केहि केहि उत्पादनहरू खट्टा दूध हो। यस लेखमा, हामी उनीहरूको प्रतिनिधिहरूको सबैभन्दा बढी उपयोगी बारेमा कुरा गर्नेछौं। और तपाईं जान्दछन् कि कितने कटेज पनीर खाएको छ, र यसको फाइदा र उपयोगी गुणहरू के हो भन्ने कुरामा के हो?
यी प्रश्नहरूका उत्तरहरू फेला पार्नका लागि, तपाईंले उत्पादनको रचनालाई बुझ्न आवश्यक छ।
पनीर के हुन्छ?
यो खट्टा दूध चमत्कारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक, जसमार्फत एथलीटहरूबाट सबै चीजहरू वृद्धमा प्रयोग गर्ने सिफारिस गरिन्छ, प्रोटीन वा अन्य शब्दहरुमा। पनीर मात्र 100 ग्राम खाने, तपाईं शरीरमा 15-20 ग्राम उच्च गुणस्तरको प्रोटिन प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। र, यसको संरचना को विश्लेषण, वैज्ञानिकहरूले निष्कर्ष निकाले कि, हरेक दिन यस उत्पादन को उपयोग गरेर, एक व्यक्ति को सबै आवश्यक आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त हुनेछ।
यो सबै एथलीटहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ
आज सम्म, एक विशेष साहित्य छ, जो तर्क गर्दछ कि प्रोटीन को एक स्रोत को रूप मा पनीर कोटीज को उपयोग पुरा तरिकाले पशु मूल को प्रोटीन को लागि शरीर को आवश्यकता को पूरा गर्न सक्छन्। एकै समयमा, शोधकर्ताहरुले खातामा पनीर कति पिसाब खाएका छन् भनेर खाता राख्दछन्। आखिर, मासुले शरीरबाट पूर्णतया पाईन्छ, यसले धेरै दिन लाग्छ। र यो तथ्यले थुप्रै खेलाडीहरूलाई पराजित गर्दछ। र यही कारणले पनीर पनीर उनीहरूको लागि एक मनपर्ने उत्पादन बनिरहेको छ, र विशेष गरी जो कि जिमहरूमा संलग्न छन्। प्रत्येक एथलीटले तपाईंलाई बताउनेछ कि यो दिनको लागि कुनै पनि गाईको उत्पादन खाने को लागी आवश्यक छ र शरीरमा भारी लोड पछि बहाल गर्न आवश्यक छ।
दही मा कार्बोहाइड्रेट एकदम कम छ - 3-5 ग्राम, जसले यसलाई विभिन्न कम कार्बो डाईटहरूको लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
तर बोसो यति सरल छैन। धेरै व्यक्तिहरू, विशेष गरी परिपक्व उमेरकाहरू, उच्च-फैटी दही उत्पादन प्रयोग गर्न आदी हुन्छन्। एकै ओर, यो वसा रहित भन्दा केहि स्वाद छ, तर यो अझै कम उपयोगी छ।
पनीर पनी पिसाब कति छ?
धेरै आधुनिक पोषण विशेषज्ञहरूले पनीर को सबै बोसो मा प्रयोग गरेर सिफारिस गर्छन्। र एथलीटहरूलाई सुत्न जाने अघि सायद खाना खानको लागि दिइन्छ भन्ने तथ्यले गर्दा यो उत्पादन खाईरहेको छ र शरीरबाट बिस्तारै बिस्तृत हुन्छ। र यो शारीरिक चक्र पूरा गर्न, शरीर सोरको लागि पर्याप्त छ। पेटमा डाइजिङ कुटीज कति पनी छ भन्ने कुरामा डेटा, फरक फरक। उत्पादको वोसो सामग्रीमा निर्भर गर्दछ, यो प्रक्रियाले फरक समय लिन सक्छ।
लेखमा पनीर र मासुको शरीरले एसिम्मेलेशनको दरको अधिक स्पष्ट तुलनाको लागि, हामी खाना पाचनको तालिका दिन्छौं।
मासु (सुँगुर, मासु)
यो 4-5 घण्टाको डिकेटेड छ। एकै समयमा, यो पूर्णतया 12 घण्टामा अवशोषित हुन्छ।
यो 3-5 घण्टाको खाँचो छ। फैटी मासु को बारेमा लगभग 72 घण्टा अवशोषित हुन सक्छ।
पनीर कस्तो उपयोगी छ?
तपाईं विश्वास गर्नुहुन्न, तर यस डेयरी उत्पादनमा6भिटामिन र 14 खनिजहरूको सेट छ। निस्सन्देह, उपयोगी पदार्थहरूको मात्रा उत्पादनको तयारी गर्ने विभिन्न तरिकाहरू फरक हुन्छ। तर एकै समयमा, केही अन्य गुणहरूले मानव शरीरको लागि यस्तो उपयोगितालाई घमण्ड गर्न सक्छ।
एथेरोस्क्लोरोसिस, प्यान्रेट्रेटाइटिस, जिगर र तंत्रिका तवरमा विभिन्न रोगहरू अहिले सफलतापूर्वक दबाइको उपचारमा उपचार भइरहेको छ। तर तिनीहरूको विरुद्धमा लडाइँ र सामान्य कटेज पनीर मद्दत गर्नेछ।
गर्भावस्था र स्तनपानको समयमा पनीर पनीर
गर्भवती वा नर्सिङ मातृहरूले मात्र पोटिस आफ्नो आहारमा थपिनु पर्ने कारणले गर्दा यो फरक फरक ट्रेस तत्वहरू छन्, जुन बच्चाको लागि आवश्यक छ। यो पनि एक भूमिका र उत्पादन को पूर्ण अनुपस्थिति कुनै पनि contraindicationsations खेलिन्छ।
पनीर पिसाब कति कटाईन्छ, यो पोषक तत्वहरूको राम्रो स्रोत भनिन्छ जुन लामो अवधिको शरीरमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, जुन यो स्वस्थ जीवनशैलीको नेतृत्व गर्दछ वा खेलकुदमा जाने को लागी यो खट्टा दूध उत्पादन अनिवार्य बनाउँछ।
र यदि तपाईंले ती गुणहरूलाई विचार गर्नुहुने परिणामहरू सुधार्न वा धेरै रोगहरूको लक्षणहरू हटाउनुहुन्छ भने, तपाईं यो उत्पादन प्रयोग गर्न विचार गर्न सक्नुहुन्छ उचित पोषणको एक आवश्यक तत्व हो।
अनि त्यहाँ धेरै भिन्नता छैन कि तपाईंले खाना, दही उत्पादन वा 100% पनीर पनीर, जीविका लागि तिनीहरूको उपयोगिता सधै उच्च स्तरमा हुनेछ। निस्सन्देह, एक सफा र गुणस्तर कोष को लागी अधिक तिर्नुपर्छ, तर त्यस्ता खरीद तपाईको स्वास्थ्यमा राम्रो लगानी हुनेछ।
उबला अनाज। ताप उत्पादन तयारी निर्भर
Roughage: यो के हो? शरीर मा आहार फाइबर को भूमिका कस्तो छ? खाद्य पदार्थ मा आहार फाइबर को सामग्री
Cystitis लागि आहार: तपाईं जान्नुपर्दछ
Pancreatitis र cholecystitis लागि आहार खाना - सबै भन्दा राम्रो विकल्प रोग को alleviation लागि
लिपिड-lowering आहार, वा अन्य कोलेस्ट्रल!
किन खेल मा creatine लागि आवश्यकता
ठूलो-कैलिबर विरोधी विमान बन्दुक - प्राविधिक विनिर्देशों र फोटो
"Kuzbasslak": प्रयोग र विशेषताहरु
एप्पल सिरका: नुस्खा
फूल, फोटो र हेरविचार को घर को नाम
शाही उडान: विवरण र एयरलाइन समीक्षा
नतालिया Lebedeva: क्यान्सर विरुद्ध उनको लडाई
रात cramped बाछो मांसपेशी, यो किन भयो?
मार्कस चकमक: जीवनी र फोटो वर्ण
सुन्दर स्टाइलिश सुंदरियों लागि खैरो टन बनाउन-अप
मनन हाम्रो मस्तिष्क कसरी असर गर्छ?9अप्रत्याशित तथ्यहरू
चिनियाँ-बेलारूसी औद्योगिक पार्क "महान् स्टोन"
विवाहको 30 वर्ष: पर्ल को वार्षिकोत्सव कसरी मनाउन?